MB 2016 Agoosto, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Waxaan u malaynayaa inaad sidoo kale soo martay wakhtiyo rajo xumo markii aad Ilaahay ka bariday inuu soo dhexgalo. Waxaa laga yaabaa inaad u duceysay mucjiso, laakiin wax aan micno lahayn ma jirin; mucjiso ayaa ku fashilantay in ay dib u dhigto. Waxa kale oo aan u qaatay in aad ku faraxsanayd in aad baratay in ducadii loo bogsiiyey qof loo jawaabay. Waan ogahay gabadh ay feeraha ku soo noqdeen kadib markay ducaysay inay bogsiisay. Dhakhtarkii ayaa kula taliyay: "Wax kastoo aad samayso, sii wad!" Inbadan oo naga mid ah, waan hubaa, inaanu qalbi qaboojinno oo dhiirigelinno sababtoo ah waxaan ognahay inay kuwa kale noo duceeyaan. Had iyo jeer waan ku dhiirrigeliyaa marka dadku ii sheegaan inay ii duceeyaan. Aniga oo ka jawaabaya, waxaan dhahay: "Aad ayaad u mahadsantahay, runti runtii waxaan u bahanahay salaaddaada oo dhan!"
Waaya-aragnimadeena salaadda ayaa laga yaabaa inay ahayd mid togan ama taban (malaha labadaba). Sidaa darteed waa inaynaan ilaawin waxa Karl Barth uu arkay: "Qodobka ugu muhiimsan ee salaaddayada ma aha codsiyadayada, laakiin waa jawaabta Ilaah" (Salaadda, p. 66). Way fududahay in si khaldan loo fahmo ficillada Ilaah haddii uusan ku jawaabin sida la filayo. Qofka si dhakhso ah ayuu diyaar ugu yahay inuu rumaysto in salaaddu tahay geedi socod farsamo - mid baa Ilaah u adeegsan kara mashiinka iibka aashimadda, kaasoo qofku ku tuurayo rabitaankiisa isla markaana "sheyga" la doonayo. Maskaxdaan qaldan, oo ku dhow nooc laaluush ah, ayaa had iyo jeer ugaarsata salaadda oo ku saabsan helitaanka xaalad aan awood u lahayn inaan wajahno.
Tukashadu ma aha inay ka dhaadhiciso Ilaah inuu sameeyo waxyaabo uusan dooneyn inuu sameeyo, laakiin inuu ku biiro waxa uu sameynayo. Sidoo kale maahan in la doonayo in la xakameeyo Ilaah, laakiin in la aqoonsado in isagu wax walba xukumaa. Barth ayaa sidan u sharxaya: "Marka gacmaha la laabto gacmahayaga ducada, caasinimada aan ka qaadno cadaalad darida adduunku wuu bilaabmayaa." Bayaankan, wuxuu qirtay in innaga aan ahayn dunidan, aan ku lug leenahay himilada Ilaah ee dunidu ku tukato. Halkii aad naga saari lahayd adduunka (iyada oo ay caddaaladdarro tahay dhammaanteed), salaaddu waxay ina mideyneysaa Ilaah iyo himilooyinkiisa si loo badbaadiyo adduunka. Maxaa yeelay Ilaah dunidan wuu jecel yahay, wiilkiisa ayuu u soo diray dunida. Markaan u furno qalbiyadeenna iyo maskaxdeenna doonista Ilaah ee ducada, waxaan ku kalsoonahay midka jecel dunida iyo innaga. Isaga ayaa ah kan yaqaan ugudambaysta bilowgeeda oo naga caawin kara inaan garowno in waqtigan xaadirka ah, nolosha liidata ay tahay bilowga oo aan ahayn dhammaadka. Salaada noocan ah waxay naga caawineysaa inaan aragno in dunidan uusan aheyn waxa Eebbe rabaa inuu noqdo, wuuna ina beddelaa si aan u noqon karno rajo keenayaal halkan iyo hadda jooga Ilaah hadda jooga, oo boqortooyadii fidinaya. Markay ka soo horjeedaan wixii ay codsadeen way dhacdaa, dadka qaarkiis waxay u dhacayaan aragtida diineed ee Eebbe fog iyo tan aan kala go 'lahayn. Kuwo kale markaa ma doonayaan inay yeeshaan wax la xidhiidha aaminaadda Eebbe. Tani waa sida Michael Shermer, aasaasaha Skepti's Society, uu u soo maray (Jarmalka: Ururka Skeptics). Wuxuu iimaankiisa ka lumay markii saaxiibkii koleejka si xun ugu dhaawacmay shil baabuur. Lafdhabarta ayaa jaban oo curyaannimada awgeed awgeed, waxay kuxiran tahay curyaanimo. Michael wuxuu rumeysan yahay in Ilaah ay maqli laheyd tukashada raysashada maxaa yeelay iyadu runtii waa qof wanaagsan.
Ilaah waa xukun
Tukashadu maahan hab lagu tilmaamo Ilaah, laakiin qirasho is-hoosaysiin ah in wax walba hoostiisa ku hoos jiraan, laakiin annaga maahan. Buuggiisa God in Dock CS Lewis wuxuu sharraxayaa tan soo socota: Ma saameyn karno inta badan dhacdooyinka ka dhaca adduunka, laakiin qaar ayaa saameyn kara. Waxay lamid tahay ciyaar ay qormada iyo guud ahaaneed sheeko-qoraha u goysay qoraaga; si kastaba ha noqotee, waxaa jira xoogaa heer ah oo jilayaashu ay tahay inay horumariyaan. Waxay umuuqataa wax la yaab leh sababta uu noogu ogolaaday inaan kicino dhacdooyinka dhabta ah gabi ahaanba, waxayna umuuqataa xitaa inbadan oo la yaab leh inuu ina siiyay duco halkii qaab kale. Blaise Pascal, falsafada masiixiga ah ee Masiixiga ah ayaa sheegay in Ilaah "uu soo saaray ducooyin si uu u siiyo abuurkiisa sharaf ay isbedel ku sameeyaan."
Laga yaabee inay run noqon laheyd run in la yiraahdo Ilaah baa tixgeliyey ducada iyo ficil ahaanta ujeeddadan darteed. Wuxuu ina siiyay hal-abuurka yar yar sharafta si ay ugu awoodaan inay uga qeybgalaan munaasabadaha laba siyaabood. Wuxuu abuuray arrinta guud ahaan caalamka si aan ugu adeegsan karno xadidan; marka waxaan gacmaha iska dhaqi karnaa oo aan u adeegsan karnaa inaan quudinno dadkayaga kale ama aan dilno. Si la mid ah, Ilaah wuxuu tixgeliyey qorshihiisa ama taariikhdiisa inay u oggolaaneyso xoogaa liidata oo wax laga beddeli karo iyadoo laga jawaabayo salaaddayada. Waa doqonnimo iyo habbooneyn in la isweydiiyo guul dagaal (hadaad ka filaysid inuu ogaado waxa ugu fiican); Taasi waxay lamid ahayd nacasnimo iyo khalad in la waydiiyo cimilo wanaagsan oo loo xidho roobaadka roobka - Ilaah miyuusan ogayn inaynu qalalan nahay iyo inaan qoyanno?
Maxaad u duceyneysaa?
Lewis wuxuu farta ku fiiqayaa in Eebbe naga doonayo inaan kula xiriirno isaga salaadda oo ku sharraxdo buugiisa Miracles (Jarmal: mucjiso), Ilaah wuxuu horey u diyaariyay jawaabihii baryadayada. Marka su’aashu waxay kacaysaa: maxaad u duceyneysaa Lewis ayaa ugu jawaabey:
Markaan dhahno natiijada, dheh muran ama talo caafimaad, salaadda, badanaa maskaxda ayey ku soo dhacdaa (hadaan ogaan lahayn) in dhacdo horay loo go'aamiyay hal ama mid kale. Uma maleynayo inay tahay dood wanaagsan oo lagu joojiyo salaadda. Dhacdada ayaa run ahaantii la go’aamiyay - dareen ahaan in la go’aamiyey “kahor waqtiga oo dhan iyo adduunka”. Si kastaba ha noqotee, hal shay oo lagu xisaabtamo go’aanka oo runtii ka dhigaya shayga dhacdo gaar ah ayaa laga yaabaa inay tahay ducada aan hadda hor dhigeyno.
Ma waxaas oo dhan ma fahmaysaa? Markii laga jawaabayo ducadaada, Ilaah wuxuu tixgelin lahaa inaad tukan doonto. Gunaanadka tan ayaa kaa dhigaysa inaad ka fikirto oo aad u xiiso badan. Waxaas oo dhan waa wax badan oo caddayn kara in salaaddayadu ay muhiim yihiin; waxay leeyihiin macno.
Lewis wuxuu sii wadaa:
Si naxdin leh markay dhawaaqa u eg tahay, waxaan ku soo gabagabeynayaa galabnimadii inaan ka qeyb qaadan karno silsilado sababa dhacdooyin horey u dhacay 10.00 a.m. (Saynisyahannada qaar ayaa u fududaan inay sharraxaan ka badan yihiin tan guud ahaan la fahamsan yahay). Ku riyoodka taasi shaki la'aan waxay naga dhigeysaa inaan dareemno sidii naloo khiyaaneeyey. Hadda waxaan weydiiyaa: "Marka markaan dhammeeyo tukashada, miyuu Eebbe dib u laaban karaa oo beddelaa wixii horay u dhacay?" Maya Dhacdadu horay ayey u dhacday waana mid ka mid ah sababaha tani waa xaqiiqda inaad weydiinayso su'aalahan oo kale halkii aad ka duceyn lahayd. Markaa sidoo kale waxay kuxirantahay doorashadayda. Ficilkayga bilaashka ah wuxuu gacan ka geystaa qaabka cosmos-ka. Ku lug lahaanshahan waxaa loo abuuray weligiis ama "waqtiyada hore iyo dunidaba", laakiin ogaanshahayga arintu waxay igu gaartaa waqti go'an oo waqti ah.
Tukashadu wax ayey qabataa
Waxa Lewis doonayo inuu yiraahdo waa in salaadu wax qabato; had iyo jeer waxay leedahay weligeedna way jiri doontaa. Waa maxay sababta? Sababtoo ah salaaduhu waxay na siinayaan fursad aan kaga qeyb galno falalka Ilaahay ee wixii ku dhacay, hadda yeelo iyo waxay qaban doonaan. Ma fahmi karno sida ay wax waliba isugu xiran yihiin oo ay u wada shaqeeyaan: sayniska, ilaaha, salaadda, fiisikiska, waqtiga iyo booska, waxyaabo ay ka mid yihiin iskumid kumeelgaarka iyo makaanikada kumbuyuutareedka, laakiin waxaan ognahay inuu Ilaahay go’aamiyay wax walba. Waxaan sidoo kale ognahay inuu nagu martiqaadayo ka qeybqaadashada waxa uu sameeyo. Salaada waxbadan ayey kahadashaa.
Markaan tukado, waxaan u maleynayaa inay ugufiican tahay in salaaddayda la geliyo Ilaahay, maxaa yeelay waxaan ogahay inuu si sax ah u xukumayo oo uu ku habboonaan doono dadaalkiisa wanaagsan hab ku habboon. Waxaan aaminsanahay inuu Ilaahay wax walba ku wanaagsan ugu sameeyo ujeeddooyinkiisa ammaanta leh (taasi waxaa ka mid ah salaaddayada). Waxaan kaloo la socdaa in salaadaheena ay taageerayaan Ciise, wadaadkayada sare iyo u doodaha. Wuxuu aqbalaa tukashadeena, oo quduus ka dhigaa oo ku beddelaa Aabbaha iyo Ruuxa Quduuska ah. Sababtaas awgeed, waxaan u qaatay in aysan jirin salaado aan laga jawaabin. Ducadayadu waxay la mid tahay doonista, ujeeddada iyo himilada Saddexanka Saddex - kaas oo inbadan la aasaasay ka hor aasaaskii dunida.
Haddii aanan si sax ah u sharixi karin sababta ay salaaduhu aad muhiim ugu yihiin, Waxaan ku kalsoonahay Ilaah inay sidaas tahay. Sidaas awgeed waa la i dhiirrigeliyay markaan bartay in dadkayga kale ee bini-aadamka ah ay ii duceeyaan waxaanna rajeynayaa inaad sidoo kale dhiirrigeliso sababtoo ah waad ogtahay inaan kuu duceynayo. Uma aan jeedin inaan Ilaah u toosiyo, laakiin inaan ammaano kan wax walba haga.
Waxaan u mahadnaqayaa oo u mahadnaqayaa Ilaahay inuu isagu yahay Sayid wax kasta salaaddaheena ay muhiim u yihiin isaga.